ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဌာနမှ ပြင်သစ်ဘာသာဆရာမ Sally နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း - La France en Birmanie
> ပြင်သစ်ဘာသာ သင်ကြားမူ > ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဌာနမှ ပြင်သစ်ဘာသာဆရာမ Sally နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဌာန မြန်မာနိုင်ငံသည် ဆရာမ Sally ကို ဂုဏ်ယူချီးကျူးပါသည်။ ပြင်သစ်စာနှင့် မြန်မာစာ (၂)ခုလုံးကို သင်ပြနိုင်သော ဆရာမ Sally သည် ပြင်သစ်နိုင်ငံ Rouen တက္ကသိုလ်မှ ပြင်သစ်ဘာသာ ဆရာအဖြစ်သင် ဘွဲ့ဖြစ်သော Master2ကို ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ကတည်းက ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့သူ ဖြစ်ပါသည်။ သူမသည် ၄င်းဘွဲ့ကို မြန်မာလူမျိုးထဲမှ ပထမဦးဆုံးရရှိသော သူတစ်ဦး ဖြစ်ပါသည်။ သူမသည် ပြင်သစ်ဘာသာ ကို နိုင်ငံခြားသားများအား သင်ကြားနိုင်သော အဆင့်ဖြင့် ရပ်တန့်မနေဘဲ ပြင်သစ်ဘာသာရပ်နှင့် မြန်မာဘာသာ ရပ်များကိုလည်း နိုင်ငံခြားသားများအား မည်သို့သင်ကြားပို့ချရမည်ဆိုသော သုတေသနလုပ်ငန်းများကိုလည်း ပြုလုပ်လျက်ရှိပါသည်။
ပြင်သစ်မြန်မာ ပြန်ကြားရေးစာစောင်အတွက် သူမ၏ အဖြေများသည် ကျေနပ်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာဖြစ်ပါသည်။
မေး ဆရာမရဲ့ ပညာရေးသမိုင်းကြောင်းကို ပြောပြပါလား?
ဖြေ ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှ နိုင်ငံခြားဘာသာသင်တက္ကသိုလ်မှာ ပြင်သစ်ဘာသာကို စတင်သင်ယူခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ပြင်သစ်ဘာသာစကားကို ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဌာနမှာလည်း သင်ယူခဲ့ပါတယ်။ပြင်သစ်ဘာသာဒီပလိုမာဘွဲ့ကို ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာ နိုင်ငံခြားဘာသာသင်တက္ကသိုလ်မှ ရရှိပြီး ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဌာနမှ CECR (DALF C2) အဆင့်အားလုံးကို ပြီးမြောက်ခဲ့ပါတယ်။
မေး ပြင်သစ်ဘာသာကို ဘာကြောင့် ရွေးချယ်သင်ယူခဲ့ပါသလဲ?
ဖြေ ရည်ရွယ်ချက် တိတိကျကျတော့ မရှိပါဘူး။ ပြင်သစ်ဘာသာကို ရွေးချယ်သင်ယူတဲ့အခါမှာ နိုင်ငံခြားဘာသာတစ်ခုကို လေ့လာမိလျက်သား ဖြစ်သွားပါတယ်။ ပထမဆုံး ပြင်သစ်ဘာသာ သင်ခန်းစာကို သင်ယူပြီးတဲ့အချိန်မှာ မိမိဘာသာနဲ့မတူညီတဲ့ ဘာသာစကားအသစ်ကို သင်ယူလိုစိတ်တွေကြီးထွားလာခဲ့ပါတယ်။ နောက်တော့ ဒီဘာသာစကားကို ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်တဲ့အထိ ဆက်ပြီးသင်ယူဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
မေး ပြင်သစ်ဘာသာကို သင်ယူခဲ့တဲ့အချိန်မှာ အခက်အခဲတွေရှိခဲ့ပါသလား? အဲဒီအခက်အခဲတွေကို ဘယ်လိုကျော်လွန်ခဲ့ပါသလဲ?
ဖြေ အဓိကတော့ ပြင်သစ်ဘာသာကို သင်ယူတတ်မြောက်လိုစိတ်ကြီးမားတော့ သဒ္ဒါပိုင်းမှာရော အသံထွက်မှာပါ ကြီးမားတဲ့ အခက်အခဲတော့ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်မအနေနဲ့ လွယ်ကူတယ်လို့တောင် ထင်ရပါတယ်။ ပြင်သစ်ဘာသာစကားကို လေ့ကျင့်ပြောဆိုဖို့ အခွင့်အရေးမရရှိခဲ့တာ တစ်ခုဘဲကျွန်မအတွက် အခက်အခဲရှိခဲ့ပါတယ်။
မေး ပြင်သစ်ဘာသာကို မြန်မာပြည်မှာ သင်ယူခဲ့တုန်းက အတွေ့အကြုံတွေကို ပြောပြပါလား။
ဖြေ မြန်မာပြည်မှာ ပြင်သစ်ဘာသာကို သင်ယူရတာဟာ တခြားအင်္ဂလိပ်ဘာသာနှင့် အာရှတိုက် ဘာသာစကားတွေ သင်ယူရတာလောက် မလွယ်ကူပါဘူး။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဟာ နေ့စဉ်ဘ၀မှာ ပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဖတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် နေရာတိုင်းမှာ အလွယ်တကူ ကြုံတွေ့ရပါတယ်။ ပြင်သစ်ဘာသာစကားအတွက်တော့ ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဌာနတစ်ခုတည်းမှာပဲ ပြောဆိုလေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်။ အဲဒီခေတ်တုန်း က အင်တာနက်ကလဲ နှေးကွေးလွန်းတော့ ပြင်သစ်သတင်းတွေကိုလဲ မသိနိုင်၊ ပြင်သစ်သီချင်းတွေကိုလဲ အင်တာနက်က ကူးယူနိုင်ဖို့ မလွယ်ဘူးလေ။ ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဌာနမှာရှိတဲ့ မီဒီယာစာကြည့်တိုက် တစ်ခုပဲ ပြင်သစ်ဘာသာကို လေ့လာနိုင်တဲ့ နေရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီစာကြည့်တိုက်မှ ရရှိတဲ့ စာအုပ်စာတမ်း၊ ကာတွန်း၊ မဂ္ဂဇင်း၊ သတင်းဂျာနယ်နှင့် ၀တ္ထုစာအုပ်တွေကို အသုံးပြုပြီး ပြင်သစ်ဘာသာကိုတိုးတက်အောင် ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ရပါတယ်။
မေး ပြင်သစ်ဘာသာကို နိုင်ငံခြားသားတွေကို သင်ကြားပေးနိုင်တဲ့ ဆရာအဖြစ်သင် ဘာသာရပ်နှင့်ပတ်သက်လို့ ပြင်သစ်ပြည်ကို သွားဖို့ အခွင့်အရေးရခဲ့ပါသလား? ပြင်သစ်ပြည်မှာ နေခဲ့ရတဲ့ အမှတ်တရလေးတွေ ပြောပြပါဦး။
ဖြေ အဲဒီအခွင့်အရေးက ပြင်သစ်ပြည်ကို လေ့လာခွင့်ရရှိခဲ့ပြီး ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ပြင်သစ်လူမျိုးတို့ရဲ့အကြောင်းကို သိရှိခဲ့ရပါတယ်။
မေး ဆရာမကို အားကျပြီး ပြင်သစ်ဘာသာကို လေ့လာသင်ယူမဲ့ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေအတွက် ဘာတွေများ အကြံဉာဏ်ပေးချင်ပါသလဲ။
ဖြေ ပထမဆုံးအနေနဲ့ နိုင်ငံခြားဘာသာတစ်ခုကို လေ့လာသင်ယူတော့မယ်ဆိုရင် တိကျတဲ့ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခုတော့ ရှိရပါမယ်။ ဘာသာစကားတစ်ခုကို လေ့လာပြီဆိုရင် အဆင့်မီတဲ့ အနေအထားအထိ ရောက်အောင် သင်ယူဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အခက်အခဲတွေ တွေ့ပြီဆိုရင် အထူးသဖြင့် စိတ်အားမငယ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ အတွေ့အကြုံအရ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားအများစုဟာသုံး၊ လေး လလောက် သင်ယူပြီးကာမှ ပြင်သစ်လို ပြောဖို့ အခွင့်အရေးမရှိဘူးဆိုတာကို အကြောင်းပြပြီး လက်လွတ်ကျောခိုင်းထွက်သွားတာတွေ တွေ့ရပါတယ်။
ပြင်သစ်ဘာသာကို လုပ်ငန်းအရပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာအရပဲဖြစ်ဖြစ် သင်တန်းသားအသစ်၊အလယ်အလတ်တတ်ကျွမ်းသူများနှင့် ကျွမ်းကျင်ပြီးသူများပါမကျန် သင်ယူရန်ဆန္ဒရှိသူများအားလုံးအတွက် ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဌာန (Institut Français de Birmanie) ကို လွယ်ကူစွာ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဌာန (Institut Français de Birmanie)အမှတ်(၃၄၀)၊ ပြည်လမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။